Global Voices teny Malagasy · 23 Jolay 2019
23 Jolay 2019
Tantara tamin'ny 23 Jolay 2019
Voampanga ho nikomy ny filoha lefitr'i Filipina sy ireo hafa mpitsikera an'i Duterte
Azia Atsinanana23 Jolay 2019
Nametraka fitoriana fikomiana sy fiampangana hafa hamelezana ny filoha lefitra Leni Robredo sy olona 35 hafa ny polisin'i Filipina, fiampangana izay misy ifandraisany amin'ny famoahana horonan-tsary antserasera manendrikendrika ny fianakavian'ny filoham-pirenena Rodrigo Duterte ho manana fifandraisana amin'ny hetsika fanondranana rongony tsy ara-dalàna.
Vaovao farany Lingua volana Jona 2019
Mediam-bahoaka23 Jolay 2019
Manolotra ny vaovao Lingua volana Jona 2019 ny mpitantana ny Lingua
I Barbados ve no ho firenena Karaiba voalohany hanafoana ny fanadinana fidirana amin'ny sekoly ambaratonga faharoa?
Karaiba23 Jolay 2019
"Mendrika fanabeazana tsara kalitao izay manomana azy amin'ny FIAINANA ny ankizy tsirairay. Fa nahoana isika no manana rafitra iray izay mahatonga ireo zanatsika hihevi-tena ho adala raha toa izy ireo tsy tafita ho amina "sekoly tsara iray"?
Fitokonan'ny mpitandro filaminana tany Ekoadaoro 2010
Andro vitsy taorian'ny fitokonan'ny polisy izay niteraka korontana tao amin'ny firenena, niezaka ny hamantatra ny zava-nitranga tamin'ny 30 Septambra 2010 ny Ekoatoreana. Anisan'ireo nametra-panontaniana ary nitady valiny ireo bilaogera: Tena nisy ve ny fikasana hanongam-panjakana? Inona no tian'ny polisy hahatongavana amin'ny fitokonana, ary inona no hidiran'ny governemanta amin'izany?
Hetsi-panoherana tany Maraoka 2011
Fizahan-takelaka Lahatsoratra farany momba an'i Maraoka ato amin'ny Global Voices Lahatsoratra nasongadina tato amin'ny Global Voices – Ireo Hetsi-panoherana tany Maraoka 2011 Loharanom-baovao: Twitter – anisan'izany ny faham-baovao mivantana Facebook Sarintany Tranonkala Saripika Nanomana hetsika ho azy ireo manokana ireo Maraokana hatramin'ny nialan'ny filoha Ejyptiana. Tamin'ny 20 Febroary 2011,...
Mozika sy dihy Dangdut ao Singapaoro ary ireo rehetra mikasika ny trano
Singapaoro , toerana iray tsara hitrandrahana ireo kanto avy amin'ny manerana an'i Azia Atsimo-Atsinanana manontolo. Nentin'ny blaogera iray ao amin'ny licencetospill tany amin'ny klioba Dangdut iray ireo namany sasantsasany. Ny Dangdut dia endrika mozika avy any Indonezia.
Lasa fianakaviako ny Global Voices. Nihaonako tamin'olona mahafinaritra ary manana traikefa mahatalanjona. Nampitombo ny masonkarena sosialy efa nananako...
Amporisihina ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina mba hanome fanamarihana, na hametraka fanontaniana any amin'ny solotenan'ny biraon'ny Vondrom-piarahamonina GV, Marianne Diaz Hernández, Qurratulain Zaman sy Laura Vidal.
Fifidianana Zimbaboe 2008
Nandatsa-bato ny Zimbaboenana tamin'ny 29 martsa 2008 hifidy ny filoham-pirenena sy ireo handrafitra ny parlemanta. Andro vitsy taty aoriana, mbola tsy nambara ny vokatra ofisialy. Nanambara ny fandreseny i Morgan Tsvangirai lehiben'ny mpanohitra MDF, saingy mety tsy hiova tanana tsy misy fifandonana ny fahefana.
Andro Manerantany (iadiana amin'ny) SIDA 2008
Manamarika ny faha-20 taonan'ny Andro Erantany iadiana amin'ny SIDA (1 Desambra) ity taona ity. Olona maherin'ny 33 tapitrisa no miaraka amin'ny VIH/SIDA, ary farafahakeliny 2 tapitrisa no maty tamin'ny taona 2007. Mandray anjara lehibe amin'ny fanentanana momba ny VIH/Sida ny bilaogera manerana izao tontolo izao.